Rehefa avy niara-dalana tany Frantsa, manome fotoana ireo mpankafy azy indray, etsy amin’ny Piment Café Behoririka ry Rija Ramanantoanina, Luk ary Mahery. Efa mahazatra loatra ny fiarahana, hiompana bebe kokoa amin’ireo vazo an-gitara, nanamarika vanim-potoana maro. Tsy hadino ihany koa anefa ny hiran’ny tsirairay avy.
Anjaran’Imiangaly indray ny mizara ny kantony, anio alina, etsy amin’ny Is’Art Galerie Ampasanimalo. Hanomboka amin’ny 7 ora sy sasany ity seho miavaka ity, hitondran’Imiangaly ireo hirany somary mirona amin’ny funk, ankoatra ireo hiran’olon-kafa nohavaoziny. Hanaraka azy eo amin’ny fitendrena i Rolf sy Beeback, mpitendry amponga maroanaka ao amin’ny tarika Mage 4.
Ny mozikan’ny taona 70 sy 80, araka ny fanaovan’ny tarika Mi’Roart azy indray no hanakoako eny amin’ny Fara West Faravohitra, anio alina. Hamelona ny hiran-dry Troupah, Ny Valolahy, Bouboule, Gabhy ratsito, Nono Robel, sns, indray ry Inah sy Lilie, hampian’i Jovin sy i Nirina eo amin’ny fitendrena.
Elaela tsy heno ny tohin’ny lalan’i Mamina, ilay nahazo ny laharana faharoa tamin’ny fifaninanana “Feo tokana, gitara iray”. Mandrapahamasaky ny ketrika, manome fotoana ireo te hihanokany “takariva akostika” eny amin’ny Culina Maibahoaka Ivato izy, anio alina. Hizara ny sanganasany, izay mifototra amin’ny tendry gitara, mazava loatra, ity mpanakanto ity.